नेम्वाङपछि महान्यायाधिवक्ता खरेलको भिडियो भाइरल, हेर्नुस् संसद् विघटनबारे के भनेका थिए ? - Everest Dainik - News from Nepal
नेम्वाङपछि महान्यायाधिवक्ता खरेलको भिडियो भाइरल, हेर्नुस् संसद् विघटनबारे के भनेका थिए ?
काठमाडौंः प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार नभएको भनेर संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले बोलेको कुरा अहिले भाइरल भइरहेको छ ।
त्यो बेला उनले स्पष्टसँग नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार कटौती गरेको कुरा बताएका थिए । त्यतिबेला नेम्वाङले भनेका थिए, ‘संसद भंग गर्न पाउने अधिकारलाई प्रधानमन्त्रीले संसदविरूद्ध छडीका रूपमा प्रयोग गर्छन् । तर नेपालको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा यस्तो प्रावधानको दुरूपयोग भएकाले यसलाई नयाँ मस्यौदाबाट हटाइयो ।’
उक्त भिडियो अहिले सबैतिर भाइरल भइरहेको छ । उक्त भिडियोमा उनले बोलेका कुरालाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेको छन् । तर, अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गर्दा उनी मौन छन् । उनी ओलीका विश्वासपात्र हुन् ।
याे पनि पढ्नुस सभामुख सापकोटाविरूद्धको मुद्दाको सुनुवाइ जारी, केही समयमै निर्णय आउने
संसद् विघटनको अधिकार नभएको भनेर संविधानसभा नेम्वाङले बोलेको कुरा अहिले भाइरल भएपछि उनले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार नभएको भनेर आफूले बोलेको स्वीकार गरेका छन् तर यस विषयमा अहिले भने अदालतको फैसलापछि मात्र बोल्ने बताएका छन् ।
नेम्वाङपछि महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको संसद् विघटनबारे दिएको अभिव्यक्ति पनि भाइरल भइरहेको छ । जसमा उनले विभिन्न विकल्पमा नगई संसद् विघटन गर्न नसकिने व्यवस्था संविधानले गरेको अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
याे पनि पढ्नुस संसद् विघटनको मुद्दामा संविधानअनुसार फैसला नभए संविधान कागजको खोस्टो हुन्छः श्रेष्ठ
‘बहुमत भयो ठीक छ । दुई पार्टी मिले त्यो पनि ठीक छ । दुई पार्टी मिलेन, ठूलो दलले पनि सरकार गठन गर्न सकेन । अब कहाँ जाने त ? एकैपटक संसद् विघटन गर्ने ? दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउन सक्छन् भने फेरि मौका दिने’, सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भिडियोमा उनले भनेका छन्, फेरि मौका दिँदा पनि तीस दिनभित्र विश्वासको मत हासिल गर्न सकेन भने त्यहाँनेर मात्रै चुनाव हुने अवस्था संघीय सरकार, संघीय संसद् र प्रादेशिक संसद्को हकमा पनि त्यही व्यवस्था गरेका छौँ ।’
भाइरल भिडियोबारे उनले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेका थिए । उक्त मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा छ । उक्त मुद्दामा सरकारको पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता खरेलले बसह गर्नेछन् ।
याे पनि पढ्नुस संसद् विघटनसम्बन्धि मुद्दा संवैधानिक इजलासमा
यसअघि प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउँदैनन् भनेर अभिव्यक्ति दिँदै आएका खरेलले संसद् विघटनको पक्षमा कस्तो बहस गर्लान् ? त्यो भने हेर्न रोचक हुनेछ ।
हेर्नुस् सुवास नेम्वाङको त्यो भिडियो, भनेका थिए– प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्दैनन्
भाइरल भिडियोबारे सुवास नेम्वाङः त्यतिबेला बोलेकै हो, अहिले बोल्न मिल्दैन
ट्याग्स: अग्नि खरेल, सर्वोच्च अदालत, संसद् विघटन
६९२ पालिकाको मतपरिणाम सार्वजनिक : कुन दलले कति ?
काठमाडौंको मतगणनामा केशव स्थापितलाई सिर्जनाले पछि पारिन्
गण्डकीमा कांग्रेस-एमालेलाई ३५-३५ पालिका, माओवादीलाई ११
१ लाख ३५ हजार तिरेर हेलिकप्टरबाट सुत्केरीको उद्धार
धनुषाको सबैलाको मेयरमा माओवादीका यादव निर्वाचित